နိုငျငံရေး – Page 11 – Media9
မွောကျကိုရီးယားကို Donald Trump စကားကြှံခဲ့လသေလား
August 31, 2018 by media9
[Zawgyi] မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un နဲ့ စင်္ကာပူမှာ တွေ့ဆုံစဉ်က အဲဒီ တွေ့ဆုံမှုအပြီး ကိုရီးယားစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာစာတမ်းကို သူ့အနေနဲ့ လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်မယ်လို့ သမ္မတ Donald Trump က မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ကို ကတိပြုခဲ့ကောင်း
အီဂဈြတပျဖှဲ့ဝငျမြားက အကွမျးဖကျသမား ၂၀ အား ပဈခတျရှငျးလငျး
August 30, 2018 by media9
အီဂျစ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ-အင်တာနက်) [Zawgyi] လွန်ခဲ့သောရက်များက ပြုလုပ်သည့် အကြမ်းဖက် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားတွင် အနောက်သဲကန္တာရ ဒေသ နှင့် ဆိုင်းနိုင်း(Sinai) ကျွန်းဆွယ် မြောက်ပိုင်းဒေသများရှိ အကြမ်းဖက်သမား ၂၀ အား ပစ်ခတ် ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ ကြောင်း အီဂျစ်အစိုးရတပ်က သြဂုတ် ၂၉
အာဖဂနျတှငျ စဈအခွစေိုကျစခနျး တညျဆောကျနေ ဆိုသညျ့သတငျး တရုတျငွငျးဆို
ဓာတ်ပုံ – ariananews [Zawgyi] အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာ စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတခု တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို တရုတ်အစိုးရက သြဂုတ် ၂၉ ရက်မှာ ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရဟာ အာဖဂန်တပ်တွေအတွက် သင်တန်းပေးတဲ့ စခန်းတခု တည်ဆောက်နေပြီး တရုတ်စစ်သားတွေကိုပါ စေလွှတ်နိုင်တယ်လို့ ဟောင်ကောင်သတင်းစာ တစောင်က ရေးသားအပြီးမှာ
နိုငျငံတကာ နိုငျငံရေး ပွညျတှငျး သတငျး
မွနျမာကိုကာကှယျတဲ့ တရုတျနဲ့ ရုရှားကို Yang-hee Lee ဝဖေနျ
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းနေသည့် ပါမောက္ခ Yang-hee Lee ။ ၁၂ မတ် ၂၀၁၈။ [Zawgyi] မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ICC နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံးတင်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်တွေကို ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့
လှတျတျောဥပဒနှေငျ့ နညျးဥပဒမြေား ပွငျဆငျရနျ ကွံ့ခိုငျရေးအမတျ တောငျးဆို
[Zawgyi] လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ လွှတ်တော်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေဟာ လိုသလို ဆွဲယူ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့လိုနေပြီလို့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းအေးက ပြောပါတယ်။ သြဂုတ် ၂၉ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပါတီတူကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမောင်သင်း မေးမြန်းတဲ့
ပွငျသဈ သဘာဝပတျဝနျးကငျြရေးရာဝနျကွီး ရာထူးကနုတျထှကျ
August 29, 2018 by media9
ဓာတ်ပုံ – Reuters [Zawgyi] ပြင်သစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဝန်ကြီး နီကိုလိုင်အူလိုဟာ ရာသီဥတုနဲ့ တခြား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်တွေ တိုးတက်မှုမရှိတဲ့အပေါ် စိတ်ပျက်တယ်လို့ ပြောကြားပြီး သြဂုတ် ၂၈ ရက်နေ့က ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ ရုပ်သံတင်ဆက်သူဟောင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အူလိုဟာ
တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု တိုးမွှငျ့ရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား အပွနျအလှနျဆှေးနှေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ကို လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်။ [Zawgyi] တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ကို
အမြိုးသားနိုငျငံရေးပါတီအမညျနဲ့ ဗိုလျခြုပျဟောငျးတှေ မှတျပုံတငျ
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ နိုင်ငံရေး လောကထဲဝင်ဖို့ ပါတီမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထား [Zawgyi] အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း တချို့ဟာ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးပါတီအမည်နဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ခု တည်ထောင် ဖို့ လာရောက်လျှောက် ထားတယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြောပါတယ်။ ပါတီ တည်ထောင်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်က